अनुष्काले जन्माईन् छोरी, विराटले लेखे सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टेटस् जस्ले बनायो सबैलाई………. – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /हलिवूड/बलिवूड/अनुष्काले जन्माईन् छोरी, विराटले लेखे सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टेटस् जस्ले बनायो सबैलाई……….
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले छोरी जन्माएकी छिन् । उनले आफु जस्तै सुन्दर छोरी जन्माएर श्रीमान विराटलाई बाबु बनाएकी छिन् । छोरी जन्मिएको खुशीयालीमा भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीले सामाजिक सञ्जालमा आफु छोरीको बाबु भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले आज (सोमबार) आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा छोरी जन्मेको सुखद खबर दिएका हुन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अमिताभ बच्चनले यि अभिनेत्रीलाई आफ्नो घरमा भाडामा किन राखे ? महिनामा तिर्छिन् लाखौं रुपैया